အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်အရှုံးနဲ့ နိုင်ငံတကာအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်မလဲ | MoeMaKa Burmese News & Media
နိုင်ငံတကာသာဂိ၊ နိုဝင်ဘာ ၅၊ ၂၀၁၂
လာမယ့် နိုဝင်ဘာ ၆ မှာ အမေရိကန်တပြည်လုံး အမေရိကန်သမ္မတနဲ့ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပတော့မယ်။ လက်ရှိသမ္မတ အိုဘားမားနဲ့ ပြိုင်ဖက် မစ်ရော်နီတို့ အကြိတ်အနယ် ဖြစ်နေပါတယ်။ လက်ရှိ လူထုစစ်တမ်းတွေအရ သူတို့ ၂ ဦးစလုံး အပြတ်အသတ်မဖြစ်သေးပါဘူးတဲ့။
အမေရိကန်ပြည်သူတွေက သူတို့အတွက် နောက်လေးနှစ်မှာ ဘယ်သူက အကောင်းဆုံး အုပ်ချုပ်မယ့်သူ ဖြစ်မလဲ ဆိုတာကို လာမယ့် အင်္ဂါနေ့မှာ ဆုံးဖြတ်မှာပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ပြည်တွင်းစီးပွားရေး၊ ပြည်တွင်းလူမှုရေးဘ၀တွေအတွက် အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးမယ့်သူ၊ လုပ်ပေးမယ့် ခေါင်းဆောင်ကိုပဲ ရွေးကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်တွင်းက နိုင်ငံသားတွေအများစုကတော့ အဲသည် စံနှုန်းကိုပဲ စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ အခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ အခြားနိုင်ငံသားတွေရဲ့ အခြေအနေတွေကို စိတ်ဝင်စားပြီး ထည့်စဉ်းစားတာ မရှိပါဘူး။
နိုင်ငံတကာက ပြည်သူတွေနဲ့ အစုိုးရတွေ အားလုံးကတော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကို သူတို့ရွေးကောက်ပွဲလိုမျိုး စိတ်ဝင်စားကြ၊ အားပေးကြပါတယ်။ ဆွေးနွေးကြ၊ စဉ်းစားကြပါတယ်။ အခု သည်ဆောင်းပါးရေးနေသလိုမျိုးပေါ့။
တောင်အမေရိကနဲ့ အမေရိကအလယ်ပိုင်း နိုင်ငံတွေကတော့ အိုဘားမားနိုင်ခဲ့ရင် လက်ရှိ ကုန်သွယ်မှု၊ နားလည်မှုစာချွန်၊ လူဝင်မှုစနစ်တွေအတိုင်း ဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ထူးခြားမှု မရှိသော်လည်း မစ်ရော်နီနိုင်ခဲ့ရင်ဖြင့် အမေရိကန်ပြည်တွင်းက လုပ်ငန်းတွေ၊ အလုပ်ရှင်တွေကို ကာကွယ်တဲ့ ကုန်သွယ်မှုတွေ ပြန်လည် အသက်သွင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အငြင်းပွားစရာတွေ ပြန်ဖြစ်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဥရောပနိုင်ငံတွေအတွက်ကတော့ သူတို့ ကျဆင်းနေတဲ့ စီးပွားရေးကို ကျားကန်နိုင်ဖို့အတွက် အမေရိကန်ရဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်က အိုဘားမားအစုိုးရ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်တဲ့ အစုိုးရကုိုယ်တိုင် ၀င်ရောက် စွက်ဖက်မှု၊ ချေးငွေ အတုိုးနှုန်းများကို ၀င်ရောက် သတ်မှတ်မှု စတဲ့ ပုံစံတွေကို ဆောင်ရွက်နေရာကနေ ချက်ခြင်းကြီး ပြောင်းလဲပစ်ဖို့တော့ မလွယ်ပါဘူး။ သို့သော်လည်း မစ်ရော်နီအစိုးရကနေပြီးတော့ ဥရောပရဲ့ စီးပွားရေးပြန်လည်ထူထောင်မှုမှာ အစိုးရစွက်ဖက်မှုထက် လုပ်ငန်းရှင်တွေကနေ တိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ်ပြီး ဆောင်ရွက်ကြဖို့ တိုက်တွန်းတာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းနဲ့ အာဖရိကနိုင်ငံတွေအတွက်ကတော့ အိုဘားမားလက်ထက် အမေရိကန်ရဲ့ တိုက်ရိုက်စွက်ဖက်မှုတွေထက် ဒေသခံတွေနဲ့ အိမ်နီးချင်းတွေကတဆင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို အားပေး မြှောက်ပင့်ပေးတဲ့ ပေါ်လစီနဲ့ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်နေတာတွေဟာ အိုဘားမားနောက် ၄ နှစ်မှာ ပိုအရှိန်ရလာနိုင်ပါတယ်။ ဒေသဆိုင်ရာ နိုင်ငံပေါင်းစုံအဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ ဥရောပသမဂ္ဂတို့၊ အာဖရိကသမဂ္ဂတို့၊ အာရပ်သမဂ္ဂတွေရဲ့ အခမ်းကဏ္ဍကို အားပေးတာတွေ ပိုမိုးကျယ်ပြန့်လာနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် မစ်ရော်နီသာ အနိုင်ရခဲ့ရင်ဖြင့် တမျိုးတဖုံ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ တိုက်ရုိုက်ဖိအားပေးတာတွေ၊ နောက်ကွယ်ကနေ စွက်ဖက်တာတွေ၊ ဆွေးနွေးပွဲတိုင်းမှာ အမေရိကန်က နေရာတကာ ပါတာတွေ ပြန်မြင်ရနိုင်ပါတယ်။ အီရန်တို့ ပါလစ်တိုင်းနဲ့ အစ္စရေး တို့မှာ တမျိုးတဖုံ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အာရှနဲ့ တရုတ်မှာတော့ ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ စစ်စခန်းပြင်ဆင်ရေး လုပ်ငန်းများနဲ့ အမေရိကန်က နေရာယူထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယတို့ရဲ့ စီးပွားပြိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးမှာ အမေရိကန်ဟာ နှစ်ဖက်စလုံးအတွက် ဖောက်သည်ကြီးအဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်နေပါတယ်။ သူအဓိက ၀င်ရောက် စွက်ဖက်မှုဟာ မြန်မာပြည်ပဲ ရှိပါတော့တယ်။ မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အာရှနိုင်ငံတွေကိုယ်တိုင်က ရှေ့ကနေ ရင်ဆိုင်ကြဖို့ကို အားပေးနေတဲ့ ပုံပါပဲ။ မစ်ရော်နီများ နိုင်ခဲ့ရင် အဲသည်ပေါ်လစီတွေကို သိပ်ပြီး ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မှု ပြောင်းလဲမှု သိပ်လုပ်မယ့်ပုံမရှိပါဘူး။ ဘာကြောင့်ဆိုတော့ သူကိုယ်တိုင်က ဘယ်လိုမှ ရေးကြီးခွင်ကျယ် မပြောခဲ့လို့ပါပဲ။
တရုတ်၊ ရုရှား၊ မြောက်ကိုရီးယား၊ အီရန်၊ အာရှ၊ အာဖရိကနဲ့ တောင်အမေရိကက အာဏာရှင်များနဲ့ ဆက်ဆံရေးကတော့ အိုဘားမားရဲ့ ရှေ့ ၄ နှစ်မှာ ပိုမို ထိတွေ့ဆက်ဆံ၊ ပိုမို ဖိအားပေးဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ သွားမှာပါပဲ။ ပြီးတော့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကို ပိုမို အုပ်စုဖွဲ့စေပြီးတော့ အဆိုပါနိုင်ငံတွေကို ရင်ဆိုင်ခိုင်းမယ့် ပုံကို ဖော်ဆောင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မစ်ရော်နီတို့ အစုိုးရသာ ပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုရင် ရီပတ်ဘလစ်ကန်ပါတီရဲ့ မူလပေါ်လစီဖြစ်တဲ့ သူရဲကောင်း အာကျယ်ကြီးအဖြစ် ပြန်လည် မြင်တွေ့ကြရမယ် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ လက်ရှိ အမေရိကန်ပြည်တွင်းက သတင်းတွေ၊ အာဘော်တွေကို လိုက်လံ ဖတ်ရှုရင်း စိတ်ထဲပေါ်တာတွေ ချရေးလိုက်တာပါ။ အမေရိကန်ပြည်သားတွေကတော့ ၄ နှစ်တခါ ၈ နှစ်တခါ သမ္မတအသစ်၊ ပေါ်လစီ စနစ်အသစ်တွေ ပြောင်းလဲ အကောင်အထည်ဖော်နေကြဆိုတော့ သူတို့အတွက်က ငါးပျံတလှည့်၊ ဗုံလုံတလှည့်ဆိုတာကို အတွေ့အကြုံ ရှိပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်လွန်းလှ (၄ နှစ် ၈ နှစ်)၊ ရှုံးလွန်းလှ (၄ နှစ်၊ ၈ နှစ်) ဆိုတော့ တာတိုပြေးတဲ့ဆီမှာ အပင်ပန်းခံသင့်သလောက် ခံကြသလို ရေရှည်အတွက်လည်း သက်လုံကောင်းအောင် အမောလုံကြတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ သွားကြတဲ့ ပုံပါပဲ။
တခါ နိုင်တာနဲ့ တသက်လုံး နိုင်ပြီဆိုပြီး မမော်ကြွားသလို၊ တခါလောက် ရှုံးတာနဲ့ တသက်လုံး မခေါ်နိုင် မပြောနိုင် စိတ်ဆိုး စိတ်ကောက်ကြတဲ့ လူမျိုးတွေ မဟုတ်ပါဘူး။
ကဲ … ဘယ်သူနိုင်မလဲ။ အိုဘားမား လား၊ အိုဘားမား လား။
3 Responses to အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်အရှုံးနဲ့ နိုင်ငံတကာအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်မလဲ
Salai Chin on November 5, 2012 at 7:08 pm
You ar side on Obama but I appresiate Romney
Tun Aung Tun on November 7, 2012 at 4:59 am
!!!!! —– If Republican win , America will be more Great and Grand in the face of international —– !!!!
may lay on November 7, 2012 at 10:36 am
အိုဘားမား ပဲ ဆက်လက်ပြီး သမ္မတအဖြစ် အနိုင်ရရှိနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလျက်…